Wasiir Faransiis ah oo sheegay ‘dagaalka ganacsiga inuu dhab yahay’ | Saxil News Network
Wasiir Faransiis ah oo sheegay ‘dagaalka ganacsiga inuu dhab yahay’
July 22, 2018 - Written by editor
Image captionMaamulka Trump ayaa sheegay ilaalinta waxsoosaarka biraha iyo alumuniumka ay quseeyso arrimaha amniga
Wasiirka maaliyadda ee Faransiiska ayaa wuxuu sheegay Bruno Le Maire ayaa shirka Argentina ee ay isugu yimaaddeen wasiirrada G 20 kaga digay inuu dagaalka ganacsiga uu dhab yahay.
Wuxuuna intaa ku daray canshuuraadka uu mareykanka keli soo rogo ay la mid tahay “sharciga keymaha”.
Hase ahaatee wasiirka maaliyadda ee dalka Mareykanka Steven Mnuchin ayaa dfaacay canshuurta dalkiisa uu soo rogay isaga oo waddamada Yurub iyo Shiinaha ugu baaqay iney suuqyadooda u furaan loollanka suuqa xorta ah.
Toddobaadki hore eyuu madaxweyne Trump uu waddamada Yurub ganacsigooda uu ku tilmaamay mid xun.
Ganacsiga Mareykanka ayaa wuxuu dhibaata kala dhaxeeyaa 29-ka dal ee ka tirsan waddamada Yurub iyo Shiinaha.
Shirka labada maalmood ka socda Bones Aires waxaa isugu yimid wasiirrada maaliyadaha iyo 20 bangi ee caalamka ugu waaweyn.
Muxuu yiri wasiirka Faransiiska?
Mr Le Maire wuxuu wakaaladda wararka ee AFP uu u sheegay, “Hay’adda ganacsiga Addoonka waa ineysan howlaheeda ku saleynin sharciga keymaha uu mareykanku wado oo sida goonida canshuuraha lagu soo rogayo”.
Image captionMnuchin (waa ninka bidixeeya) iyo Bruno Le Maire oo ku kulmay shirka G20 ee Buenos Aires
“Saharcigan keymaha, sharcigan aan munaasabka ahayn, ma noqon doono mid wanaajiyo xiriirka ganacsi mustaqbalka ee caalamka ”
Mr Le Maire wuxuu intaa ku daray “Sharcigan keymaha waxay la wanaagsan tahay oo keli kuwa guul darreysanaya, waxuuna daciifiniya horumarka, waddamada jilicsanna waxyeello ayuu u geysan doonaa waxuuna ku dambeyn doonaa masiibo siyaasadeed oo ka dhalato.”
Wasiirrada dalalka G7 oo cambaareeyey canshuurta Mareykanka uu soo rogay
Dagaalka ganacsigana hadda dhab ayuu noqday, marka waa iney waddamada Yurub ay tixgelinin wadahadallo ay ku doonayaan ganacsi xor oo ay la yeeshaan Mareykanka ilaa uu Mareykanka markahore ka noqdo biraha iyo alumuniumka canshuurta uu ku soo rogay.
Mr Mnuchin muxuu yiri?
Wasiirka maaliyadda Mareykanka oo si weyn u difaacay mowqifka madaxweyne Trump uu ganacsiga ka taagan yahay waddamada yurub iyo Shiinaha wuxuu ugu baaqay suuqyadooda iney u furaan loollanka ganacsiga xorta ah.
Wuxuuna intaa raaciyey, “farriinteydu wey caddahay waxayna la mid tahay midda uu madaxweyne Trump uu ka jeediyey shirka waddamada G7 oo bishi hore lagu qabtay Canada, marka haddii ay waddamada Yurub ay aaminsan yihiin ganacsiga xorta ah, waxaan diyaar u nahay inaan saxiixno ganacsiga xorta ah oo aan canshuur lahayn, caqabada canshuureed iyo kabitaan seddexdaba midna u baahneyn. ”
Mar uu Shiinaha ka hadlayeyna Mr Mnuchin wuxuu ka digay iney aad suuragal u noqon karto in canshuuro dheeraad oo ciqaabo la saaro waddanka shiinaha.
Isaga oo sii raaciyey “inuu Mareykanka ujeeddadiisu idiin caddeeyey